घर परिवार एस आराम नभनि देश र जनताको सेवामा खटिने नेपाल प्रहरीका पीडा : ३० वर्ष जागिर, १७ वर्षसम्म एउटै पद । - Nepal Times Online
घर परिवार एस आराम नभनि देश र जनताको सेवामा खटिने नेपाल प्रहरीका पीडा : ३० वर्ष जागिर, १७ वर्षसम्म एउटै पद ।
Posted on February 7, 2021 February 7, 2021 Author USER-1	Comment(1)
नेपाल प्रहरीमा ६ हजार पाँच सय र सशस्त्र प्रहरीमा आठ हजार पाँच सय गरी अहिले १५ हजार दरबन्दी रिक्त छन् । भद्रगोल वृत्तिविकास योजनाका कारण दुवै संगठनमा राजीनामा दिनेको लहर चलेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएलगत्तै नेपाल प्रहरीमा कायम १६ एआइजीको दरबन्दी घटाएर चार कायम गरियो । प्रदेशमा खटाइसकिएका एआइजीको दरबन्दी नै फाजिलमा प¥यो । सँगै डिआइजीको दरबन्दी पनि ३४ (प्राविधिकसहित)बाट घटाएर २२ मा झारियो । त्यसवेला कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि कुनै पनि पदमा दरबन्दी नथपिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो ।
तर, त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै एआइजीको दरबन्दी थपेर पाँच पु¥याइयो । सँगै डिआइजी दरबन्दी पनि २७ पु¥याइएको छ । तर, जुनियर प्रहरी अधिकृतको हकमा वृद्धिविकासलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नेपाल प्रहरीबाट अहिलेसम्म एउटा पत्र पनि गृह मन्त्रालय पुगेको छैन ।
‘तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकासमा भद्रगोल देखियो । केही गुनासा ज्ञापनपत्रका रूपमा आएका छन्, केही मौखिक पनि आएका छन् । यसलाई अध्ययन गर्न र मागको सम्बोधन गर्न जरुरी छ । त्यसैका लागि गृहले समिति बनाएको छ । आशा गरौँ, पक्कै पनि परिणाममुखी काम हुनेछ,’ गृहप्रवक्ता बुढाले भने ।
वृत्तिविकासमा देखिएको यो समस्या समाधानका लागि धेरै पहिलादेखि बहस हुँदै आएको पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए । ‘प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका निजामतीमा नासु हुने, सेनामा अधिकृत हुने, तर प्रहरीमा खरिदारको सेवा–सुविधा मात्र हुने व्यवस्थाले जुनियर अधिकृतमाथि अन्याय भइरहेको छ । यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
माथिल्लो तहमा बढुवाको योग्यता नै नपुग्दा इन्स्पेक्टरमा भने बढुवाको जाम छ । अहिलेसम्म सशस्त्रमा १३ वटा इन्स्पेक्टरको ब्याच भर्ना भइसकेका छन् । जसमध्ये पहिलो ब्याचका नौजना नै एसएसपी भइसकेका छन् भने दोस्रो ब्याचका एसपी भएका छन् । तेस्रो, चौथो र पाँचौँ ब्याचका डिएसपीमा छन् । छैटौँ ब्याचदेखि १३औँ ब्याचसम्मका सबै इन्स्पेक्टरमै थन्किएका छन् ।
छैटौँ ब्याच ०६२ को असारमा भर्ना भएको थियो, त्यसमा करिब ९० जना छन् । जसमध्ये आधा केही हप्तापछि बढुवा हुनेछन् भने बाँकीलाई बढुवा हुन अझै करिब तीन वर्षसम्म लाग्न सक्छ । किनकि माथिल्लो तहमा अबका वर्षमा थोरै मात्र पद रिक्त हुनेछन् । जसअनुुसार छैटौँ ब्याचपछि भर्ना भएका इन्स्पेक्टरलाई डिएसपीमा बढुवा हुन करिब २० वर्ष लाग्ने अवस्था छ । जब कि सशस्त्र प्रहरीको सेवाअवधि ३० वर्ष मात्र छ । इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका कतिपय एसपीबाटै अवकाश हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
थापाका अनुसार निश्चित अवधिपछि स्वतः बढुवा हुनुपर्ने, माथिल्लो तहमा दरबन्दी समायोजन वा थप हुुनुपर्ने तथा उच्च पदको पदावधि घटाउनुपर्नेजस्ता विकल्पसहितको प्रतिवेदन आएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय र संगठनको नेतृत्वबाट पहल हुन सकेको छैन ।
‘नेपाल प्रहरीमा सेवाबाट राजीनामा दिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै जुनियर तहका प्रहरी कर्मचारी धेरै छन् । यसको कारण हामीले नियालिरहेका छौँ । कहीँ न कहीँ यो वृत्तिविकाससँग गएर जोडिन्छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने, ‘अब यसको पुनरावलोकन गर्नेतर्फ गृह मन्त्रालय गम्भीर छ र हुनु पनि पर्छ ।’
जुनियर कर्मचारीको वृत्तिविकासमा ध्यान नदिँदा संगठनमै असर परेको छ : राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वएआइजी, नेपाल प्रहरी
प्रहरीको रणनीति बनाउँदा हामीले जहिले पनि उच्च तहलाई मात्र हे¥यौँ । तल्लो तहलाई प्राथमिकता दिन सकेनौँ । प्रहरी भनेको प्रोसेस ओरेन्टेड संस्था हो । यस्तो संस्थामा वृत्तिविकासका कुरा सुनिश्चित गरिएन भने प्रहरीबाट दिइने सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुन सक्दैन । सबै तहलाई अवसर पहुँचको समान वितरण हुनुपर्छ । माथिल्लो तहमा छिटो बढुवा गर्न एसएसपी र एआइजीको दरबन्दी बढाइयो, तर तल्लो तहलाई ध्यान दिइएन । वरिष्ठ सइ राख्ने कि भन्ने कुरा पनि भएको थियो, छलफलमै सीमित भयो । निजामतीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गरेको व्यक्ति भर्ना हुँदा नासु हुन्छ । सेनामा अधिकृत हुन्छ । तर, प्रहरीमा भने खरदारसरहको सुविधा छ । यो विभेदलाई तत्काल हटाएर उनीहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ । २० वर्ष जागिर खाँदा यो तहमा पुग्छु भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
समस्या समाधानका लागि विकल्पसहित प्रतिवेदन दिएका थियौँ, कार्यान्वयन भएन : नारायणबाबु थापा, पूर्वएआइजी, सशस्त्र प्रहरी
सशस्त्र प्रहरी बल भनेको विशेष अवस्थामा निर्माण भएको फौज हो । त्यतिखेर एक्कासि दरबन्दी बढ्यो । द्वन्द्वको समयमा धेरै इन्स्पेक्टर र डिएसपी फिल्डमा चाहिने भएकाले त्यहीअनुसार ती पदमा दरबन्दी राखियो । तर, माथिल्लो तहमा त्यो अनुपातमा बढ्न सकेन । अहिलेको सशस्त्र प्रहरीको समस्या यही हो । करिअर प्लानिङमार्फत यो समस्या समाधानको पहल पनि भयो । ०७३ सालमा मेरै अध्यक्षतामा एक समितिसमेत बनेको थियो । हामीले सबै पाटो औँल्याएर प्रतिवेदन दियौँ । निश्चित अवधि पुगेपछि स्वतः बढुवा हुने प्रावधान लागू गर्न सुझाब दिएका थियौँ । त्यो सम्भव नभए केही अनावश्यक रहेका तल्लो पद कटौती गरेर माथिल्ला पदमा समायोजन गर्न तथा वा थप्न भनेका थियौँ । माथिल्लो पदमा पदावधि घटाएर पनि यो समस्या समाधान हुन सक्थ्यो । तर, समाधानका लागि राज्यबाट पहल भएन । यो खबर नागरीक दैनिक बाट साभार गरिएको हो ।
Tagged नेपाल, नेपाल प्रहरी, प्रहरी
मलेसियामा ज्यान गुमाएका १७ नेपालीको शव नेपाल ल्याएर आफन्तलाई बुझाइयो ।
हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको पनि बिहे हुने भएपछि उनकी पूर्व पत्निले मनोज गजुरेललाई द”नक दिएकी छिन् । उनको पहिलेको बिहे सफल नभएपछि मनोज र उनकी श्रीमति अलग बस्दै आएका थिए । मनोजले बिहे गर्ने थाहा पाएपछि मिना ढकालले फेसबुकमा आफ्ना भावना व्यक्त गरेकी छिन् । मिनाले पछिल्लो फेसबुक स्टाटसमा लेखिन्, ‘छि छि अन्तिम निर्णय हो […]
श्रीमतीका लागि दुवईको जा’गीर छोडे, भारतमा जागीर गर्थे श्रीमतीलाई पनि लिएर भारतमा ५ महिना राखे । अब त बानी ठिक होला भनेर घरमै रा’खेर भारत बसेका थिए । छोराछोरी हु’र्कदै थिए त्यसैले श्रीमतीलाई नेपालमै छोडेर उनी भारतमा क’माउन थाले । श्रीमतीको चाल उस्तै भएको उनले थाहा पाए । उनले श्रीमतीलाई ८ दिन पछि आउँछु भनेर […]
खुसिको खबर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले रासनभत्ता ५० प्रतिशत बढाउन सिफारिस ।
One Reply to “घर परिवार एस आराम नभनि देश र जनताको सेवामा खटिने नेपाल प्रहरीका पीडा : ३० वर्ष जागिर, १७ वर्षसम्म एउटै पद ।”
I came to give italook. I’m definitely enjoying thee information. I’m book-marking and woll be tweeting this to
mmy followers! Great blog and outstanding design aand style.
D; Kaylene, https://www.turnkeylinux.org/user/1421458
“प्रेसर लो”भएका व्यक्तिहरुले खानुहोस् यी १० खानेकुरा, प्रेसरबाट केही आराम
सुखी गृहस्थ जीवनका पाँच सूत्र